MATE 1.26 zvakare inosvitsa nyowani maficha muWayland | Linux Vakapindwa muropa
Izvo hazvigone kutaurwa kuti idiki raishandiswa desktop, asi haina mukurumbira kupfuura iyo GNOME iyo Fedora, Ubuntu kana Debian inoshandisa nekumira kana iyo KDE yatinoshandisa (zvinoenderana kuongorora kwedu) mumwe muvatatu vashandisi veLinux. Nechikonzero ichocho, isu tinogona kupotsa rumwe ruzivo kubva kune ino tafura uye kunonoka zvishoma kumhan'ara kumhara. Mazuva mashoma apfuura, nhoroondo yepamutemo yeprojekiti yakaburitsa nhau dzekuburitswa kwe MATE 1.26, asi akazviita muma tweets akati wandei uye pane zvese zvaakashandisa, zvinovhiringidza.
Izvo zvavakaburitsawo, uye heino zvese zviri pachena nemusoro wenyaya, yaive yekuburitsa chinyorwa. Mariri vanotitsanangurira kuti vatora nguva yakati rebei kupfuura zvakajairwa, mwedzi gumi nesere, asi vanga vachifara nezvavainazvo. Pakati pezvinhu zvitsva, uye semamwe mapurojekiti, pane Wayland kugadzirisa, inozove yakajairwa munguva pfupi.
MATE 1.26 zvakakosha
Yakawedzera Wayland rutsigiro rweLectern, System Monitor, Pen, Terminal uye zvimwe zveDesktop zvinhu. Zvakare Calculator uye Terminal izvozvi zvinogona kuvakwa naMeson.
Zvakawanda zvakagadziridzwa muPen, senge grid kumashure maitiro iyo inoshandura mupepeti kuita notepad kana yemhando plugin iyo ikozvino inotsigira kugadzirisa zviito.
Wakawedzera nzira pfupi yekuratidzira / kuvanza manhamba emutsara: Ctrl + Y.
Iyo Control Center inoratidzira yakagadziridzwa hwindo rekuda dialog ine zvimwe sarudzo.
Sarudzo yekuyera sikirini yakawedzerwa kune dialog screen.
Notifications dzave kunyanya kubatsira sezvo ivo vachitsigira hyperlinks. Uye pakupedzisira iyo Usakanganise applet yawedzerwa.
Iyo Window Chinyorwa applet ine sarudzo nyowani yekudzima mbeva kupuruzira. Iwo akasarudzika mawindo ezvigunwe zvino akapinza uye akajeka sezvaanoshandurwa senzvimbo dzeciro.
Iyo Netspeed applet inoratidza rumwe ruzivo nekukasira uye yawana netlink rutsigiro.
Calculator yakagadziriswa kune raibhurari yeGNU MPFR / MPC, zvinoreva kunyatsojeka, kuverenga nekukurumidza uye nekuwedzera mabasa (semuenzaniso, iro riemann zeta basa uye iro Gaussian kukanganisa basa). Chekupedzisira, ivo vakawedzera nhoroondo kuratidza kuverenga kwazvino. Calculator yave kugadzirisika kana nhoroondo yaitwa. Yakawanda yekumhanyisa kumhanyisa kumhanya yakagadziridzwa zvakanyanya. Inokurumidza zvikuru modular arithmetic kuongorora (modular exponentiation kugona).
MuBhokisi faira maneja unogona kusarudza nyowani maBhukumaki eparutivi. Caja yakagamuchira rutsigiro rwekuomesa dhiraivha kubva kumenu yemamiriro. Iyo Bhokisi Yekuita yekuwedzera iyo inobvumidza kuwedzera zvekupokana zvirongwa kutangwa kuburikidza neyemukati menyu iri ikozvino chikamu cheDesktop.
Kufambisa kuburikidza nemagwaro makuru paLectern ikozvino kwanyanya kukurumidza, sekutsvaga kwekunonoka kwakatsiviwa nekutsvaga kwemuti webhinari.
Iyo yekumusoro tsoka yekuona gwaro muoni yakawedzeredzwa kuderedzwa seEvWebView ikozvino yagadzirwa chete kana zvichidikanwa.
Iyo Marco hwindo maneja ikozvino inodzoreredza yakaderedzwa windows kune yavo yepakutanga chinzvimbo zvakavimbika zvakanyanya.
Engrampa yakagamuchira rutsigiro rweElectronic Publishing (EPUB) uye maARC mafaera. Zvakare, iwe unogona ikozvino kuvhura yakavharidzirwa mafaira eRAR.
Power Manager ine sarudzo nyowani yekugonesa keyboard dimming uye yakaendeswa kune libsecret.
Mazhinji eAma About dialogs akagadziridzwa nezvakanaka tsananguro.
Yakagadzirisa yakawanda mabugs, kumwe kuyeuka kwekudonha, uye nekuvandudza iyo codebase yezvinenge zvese desktop zvigadzirwa.
Zadza rondedzero yeshanduko kune iyo kusunungura chinyorwa, Pakati payo pane zvakadzama nhau mulectern, bhokisi, chikafu, furemu, mate-desktop, maraibhurari uye iyo desktop yese pachayo.
Vashandisi vanofarira vanogona download kodhi kodhi kubva MATE 1.26 kubva Iyi link. Kana iwe usiri kuda kubata zvakawandisa, yakanaka sarudzo ndeyekumirira kugoverwa kweLinux kuwedzera iwo mapakeji nyowani, ayo anoitwa neRolling Release masisitimu mumazuva mashoma anotevera, ayo asati atoita kudaro, uye Ubuntu MATE muna Gumiguru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » MATI
Chinhu chakafanana chinofanirwa kuitika neXFCE 4.18 zvine chekuita neWayland
Ehe, ichave iri 'munguva pfupi' chiyero. Iyo yepamusoro-soro imwe yenzvimbo dzakakurumbira ndeyeGNOME, uye KDE / Plasma yanga ichizvigadzirirawo kwenguva yakati. Nekufamba kwenguva, munhu wese anozozvitora.
Chenjera kuti 1.26 inopa zvikanganiso. MuMozi haibvumire iwe kuwedzera zvinongedzo kana maforodha, uye iyo Ruzha icon muDanho rePaneru yanyangarika.